Xayyaarri Itoophiyaa Dabliinii gara Waashingitan balali’aa ture hatattamaan akka bu’u taasifame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Xayyaarri Itoophiyaa Dabliinii gara Waashingitan balali’aa ture hatattamaan akka bu’u taasifame
Xayyaarri Itoophiyaa Dabliinii gara Waashingitan balali’aa ture hatattamaan akka bu’u taasifame
Xayyaarri Daandii Itoophiyaa, Boeing 787 Dream-liner, magaalaa Dabliinii (Ireland) gara Waashingitan (USA) balali’aa ture, ET500, rakkoo motora irraa gayeef jecha hatattamaan Dabliinitti deebi’ee akka bu’u taasfifamuu, Independent gabaaseera.
Xayyaarri Daandii Itophiyaa sa’aa tokkoof wolakkaaf erga balali’aa turee booda motorri xayyaarichaa tokkochi hujii kan dhaabe. Sana booda ture xayyaarichi hatattamaan deebi’ee magaalaa irraa ka’etti, Dabliin, akka bu’u kan taasifame.
Xayyaarichi imala kan eegale Boolee, Finfinnee, irraa ture. Dabliinitti bu’ee erga boba’aa guuttatee booda kan gara Waashingitanitti fuulleffate.
Xayyaarri Daandii Itoophiyaa, ET500, gara Waashingitan balal’aa ture kuni imaltoota 300 fe’e akka tures beekameera. Balaan imaltoota irra gaye tokkos akka hin jirre beekkameera.
xayyaara daandii itoophiyaa
Previous articleBaankiin Addunyaa imaammata bulchiinsa lafa magaalaa Itoophiyaa irratti qeeqa cimaa dhiheesse
Next articleHirriba gayaa dhabuun rakkoo dhibee sukkaaraafi onneetiif nama saaxila